Trojan Remover 6.8.8 Build 2624 - Final + Serial - .::just for share::.
Home » Trojan killer » Trojan Remover 6.8.8 Build 2624 - Final + Serial
Trojan Remover 6.8.8 Build 2624 - Final + Serial
ကွန်ပြူတာကိုပြသာနာရှာတက်တဲ့ Virus တွေကတော့ အမျိုးအစားအများကြီးပါဘဲ အဲဒီ
ထဲမှာမှ Trojan ကလည်း တော်တော်လေးကို ကွိုင်ရှာတဲ့ Virus တစ်မျိုးပါ။ သာမန် Trojan Virus ဆိုရင်
တော့ သိပ်ပြသာနာမရှိပေမယ့် Hacker တွေက Keyogger နဲ့တွဲပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ Trojan ဆိုရင်တော့
ပြသာနာကအရမ်းကြီးကိုကြီးသွားပါပြီ။ Second ပိုင်းအတွင်းမှာဘဲ Trojan ပေါင်း သောင်းဂဏန်းလောက်
ထိပွားပြီး ကွိုင်ရှာနေပါပြီ။ မိမိရဲ့ Personal Data တွေလည်း ပါကုန်ပြီပေါ့ဗျာ။ တကယ်တမ်းတော့PC
Antivirus တစ်မျိုးတည်းရှိထားရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး အဲဒါကြောင့် Malware , Spyware , Adware နဲ့
Trojan စတာတွေကို Remove လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Trojan Remover v6.8.8 Build 2624 FiNaL - FULL
နောက်ဆုံးထွက် Version လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Changes in 6.8.8 Build 2622:
• Added routines to restore disabled security services.
• Added compatibility for Windows 8.1.
Trojan Remover v6.8.8 Build 2624 FiNaL - FULL
• Incl. Serial
Download Trojan Remover v6.8.8 Build 2624 FiNaL - FULL